प्रा.डा.पुष्प प्रसाद शर्मा: मानसिक रोगका तीन पुस्ते डाक्टर – OM Hospital
प्रा.डा.पुष्प प्रसाद शर्मा: मानसिक रोगका तीन पुस्ते डाक्टर
नेपालको प्रथम मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. विष्णु प्रसाद शर्माका सुपुत्र प्रा.डा.पुष्प प्रसाद शर्मा। नेपालमा मानसिक रोगको उपचारमा कहलिएका चिकित्सक हुनुहुन्छ ।
पिताजीको बिँडो खोइ किन थाम्नुभयो उहाँले थाहा छैन । तर, अब त उहाँको छोरो पनि हजुरबा र बाको विरासत थाम्दै आइपुग्नु भएको छ । डा. विष्णु प्रसाद शर्माको विरासत प्रा.डा.पुष्प प्रसाद शर्मा हुँदै डा. प्रज्ञान शर्माले मानसिक रोगको डाक्टरको रुपमा आफ्नो भविष्य कोर्दै हुनुहुन्छ ।
उहाँले होस सम्हाले देखिनै उहाँको घरमा मानसिक रोगीको आउजाउ हुन्थ्यो । यो करिब २०२४/२५ साल तिरको कुरा हो ।
पत्रकारहरूलाई पनि मानसिक रोग के हो ? यसका बारेमा कसरी समाचार प्रकाशन गर्दा त्यसले समाजमा सकारात्मक सन्देश दिन्छ ? भन्ने खालका तालिम पनि भए बाह्रबिसेमा ।
ॐ अस्पतालका बरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ प्रा.डा.पुष्प प्रसाद शर्मासँग पत्रकार आशिष पौडेलले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित ।